Fitsaboana zavakanto sy fampiandohana afrikana - AFRIKHEPRI
Fitsaboana zava-kanto sy firosoana afrikanina
Ny niandohan'ny fanahy ara-panahy
Fifandraisana AFRICAN INITIATIONS
Ltena ilaina izy amin'ny famokarana ara-javakanto Negro-afrikanina hatrany hatrany amin'ny fitadiavana ny tsara sy ny hatsarana satria ny artista afrikanina dia tsy mitovy amin'ny estetika Greco-latina a "mimêma tou pantos ”, fanoharana ratsy amin'ny natiora: kanto ara-bakiteny ny zavakanto afrikanina.
Ny fanombohana dia mitaky ny misy fa manadio ny toetra masiaka amin'ny fampitana katroka ny hasarobidin'ny toetra maha-izy azy mba "ho teraka indray".
Amin'ity ezaka ilaina misy ity, ny fitsaboana ny zavakanto dia fitaovana tombony ho an'ny fanafahana ny fanahin'ny olona babo amin'ny raharaha ka ahafahantsika miditra amin'ny saha ara-panoharana.
Amin'ny fiandohan'ny fitsaboana ara-javakanto ho toy ny hetsika famoronana, misy ny faniriana hamorona endrika mba hifehezana ny fahantrana misy sy hahitana ny fahatsapana fitohizan-tena na (ara-kolontsaina) mandrakizay.
Eny tokoa, ny fiandohan'ny fiaraha-monina dia mifototra ny asan'ny saron-tava (sy fanodikodinana) momba ny ahiahy ny fahafatesana izay miparitaka amin'ny vondrona sosialy amin'ny fahafatesan'ny mpitarika azy: ny "maty".
Ny masker voalohany dia izay nanana ny fiheverana ny fametahana ny fatin'ny eterika an'ilay lehilahy lehibe maty kitay. Amin'ny alàlan'ny fahatsiarovan-tena ny fanehoana an'ohatra ny lohan'ny maty ary amin'ny fananganana azy ho eo amin'ny laharam-pahamehan'ny razambentsika, mpiambina ny vondrona sosialy, fa ny hetsika voalohany dia mifehy ny fiasan'ny fahafatesana ary mitondra fahatoniana sy fanantenana amin'ny ny fon'ny olona.
Ho an'ny mpamorona Negro-afrikanina nentim-paharazana, ny asa kanto dia fomba iray ahafahana mamono ny alahelo izay miafara amin'ny fitsanganan'ny Ray ara-panoharana amin'ny endrika fanehoana ideogrammatic.
Farany, ireo ideograma dia raisina ho toy ny fomba fanoharana ho an'ny razana izay mamirapiratra eo amin'ny lanitry ny kolontsaina.Ny marina dia manainga fa ny fiteny izay vokatry ny fahaizan'ny fanahin'ireo ideograma, dia ny famoronana tany am-boalohany ny mpanakanto afrikana nentin-drazana miasa. any Wood Woods.
Noho izany, avy any Meroe sy Egypt fahiny, ny fomban-drazana afrikanina dia mifototra amin'ny fitsipika fa tsy olona teraka ny olona fa ny iray dia tonga amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fanombohana.
Ny vahaolana amin'ny famaranana ny krizy sivilizasiana dia ilaina ny fanarenana ny razamben'ny mpanorina ny Drafitry ny Kolontsaina olombelona.
Teraka tamin'ny taona 1939 tao Ivory Coast, psychotherapist, mpamorona ny psycho-therapy.
Tombontsoa azo avy amin'ny menaka palmie ho an'ny volo sy ny hoditra